कसरी सजाउनलान् किशोरले अरुणिमाको जोवन ? (भिडियो) « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
कसरी सजाउनलान् किशोरले अरुणिमाको जोवन ? (भिडियो)
ठुलोपर्दा डटकम, काठमाण्डौ। मंसिर १४ गते नेपालभर रिलिज हुने नेपाली चलचित्र ‘उर्वशी’को नयाँ गीत ‘सजाउँला तिम्रो जोवन …’ सार्वजनिक भएको छ। बुधवार ठुलोपर्दा डटकमबाट सार्वजनिक गीतमा विरेन्द्र अग्रहरीको संगीत, राजेश पायल राई र रजिना रिमालको स्वर तथा सन्तोष अग्रहरीका शब्द रहेका छन्।
चलचित्रमा समावेश अन्य गीतहरुमा विकाश चौधरी र अर्जुन कौशलको संगीत रहेको छ। सन्तोष अग्रहरी, जानकी पन्थ र कृष्ण कार्कीका शब्द तथा राजेश पायल राई, ईन्दिरा जोशी, सन्तोष लामा, प्रविशा अधिकारी, रजिना रिमाल, आकांक्षा बस्याल र अर्जुन कौशलको स्वर रहेको छ।
मनिष पन्थको लेखन तथा निर्देशन रहेको ‘उर्वशी’लाई हिमगिरी फिल्मस् प्रा.लि.को ब्यानरमा खगेश्वर पुनले निर्माण गरेका छन्। किशोर खतिवडा, निता ढुंगाना, अरुणिमा लम्साल, किशोर श्रेष्ठ (डेब्यू), मुकेश आचार्य, प्रदिप ढकाल, रश्मि भट्ट, संगम राई, कुलचन्द्र पुरी, शुशिल थापा लगाएतका कलाकारहरुको अभिनय गरेका छन्।